Nezvedu - Hebei Kenuo Rubber Zvigadzirwa Co, Ltd.
Hebei Kenuo Rubber Zvigadzirwa Co, Ltd.
yakatanga kusimbiswa muna 1994, iine vashoma vepakati vashandi.Pamwe nekusimudzira, yakashandiswa kune morden kambani nhasi.Yakanyoreswa capital yaive 5 mamirioni RMB, iri muXinle City Economic Development Zone uye inovhara nharaunda ye26668 mativi metres, iyo chivakwa chikuru chinosanganisira R & D chivakwa, multifunctional hofisi chivakwa, yekugadzira musangano, mbishi zvinhu imba yekuchengetera, akapedza zvigadzirwa imba yekuchengetera, magetsi nzvimbo yekuparadzira, kutenderera kwetangi remvura, moto mvura tangi uye zvimwe zvinowedzeredza zvivakwa. Kambani yedu ine vanhu zana negumi nevasere, vanosanganisira vashanu vevatariri vevakuru, 3 mainjiniya ekugadzira zvigadzirwa, vanamakanika vakuru vanomwe, vashandi vekugadzira makumi mapfumbamwe nevamwe. Iyo kambani ine akati wandei madhipatimendi, yakaenzana manejimendi sisitimu, yakakwana basa kuyerera uye yakanaka vatengi sehurongwa, iyo inopa yakasimba chivimbiso chekusimudzira chigadzirwa, kugadzirwa, mhando, kutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi etc.
Bhizimusi hombe rekambani ndiko kugadzira, kugadzirisa uye kutengesa zvigadzirwa zveshangu, epurasitiki, rabha zvigadzirwauye zvigadzirwa zvepurasitiki. Chiyero chekugadzira, yepamusoro uye yepamusoro mhando yekugadzira haigone kupatsanurwa kubva kune yakanakisa michina, uye Kenuo Rubber yakaisa mari kwazvo mukusuma uye yakazvimirira dhizaini uye kugadzira kweanoverengeka ekugadzira mitsara. Iyo kambani ikozvino ine matatu seti ekugadzira mitsara yeSJZ80 / 156 mhando synthetic resin tile uye gumi nemaviri seti yejekiseni kuumba yekugadzira mitsara yemapurasitiki slippers, ayo anogona kuwana wepagore kugadzirwa kwe75000 mativi emamita e photovoltaic yakakosha yesilicon pepa, 1.8 mamirioni emamirimita emagetsi ekugadzira. nebwe Tile, zviuru mazana matatu emamirimitagreen rabha pasiuye mamirioni gumi nemaviri emaviri epurasitiki slippers. Yegore rekugadzira kukosha ndeye 266 mamirioni yuan.
Iyo synthetic resin tile inogadzirwa mukambani medu ine maitiro e-anti-kuchembera, anti-mutoro, ngura kuramba, kupisa kupisa, kudzora moto, kuputira, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, izvo zvave zvichishandiswa zvakanyanya mu flat-to-slope engineering, nzvimbo nyowani dzekugara dzekumaruwa, horo nedzimba dzevaeni, zvinokwezva zvinechimiro zvevanhu vekare, carport uye garaji, indasitiri uye mugodhi chirimwa, acid uye alkali kuramba chirimwa, yemahombekombe emunyu kukuvara kwekudzivirirwa kwekuvaka uye dzimwe nzvimbo, chinova chinhu chakanakira marudzi ese yedenga risingaperi rekushongedza denga uye isina mvura. Iyo kugadzirwa kweKenuochakaita zvokugadzirwa nebwe Tile inotungamira iyo indasitiri mamiriro ekugadziriswa kwetiles indasitiri, iyo zvakare inopindura zvizere kune nyika kuchengetedza mamiriro ezvemamiriro emhepo yakadzika kabhoni uye kumisikidzwa kwesangano rekuchengetedza magetsi.
Iyo shangu zvigadzirwa zvakagadzirwa nekambani yedu zvinoratidzirwa neakasarudzika dhizaini, yakakwana dhizaini, yakatsiga mhando, kugadzikana uye runako, hutano uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, izvo izvo zvino zvine EVA, PE, PVC, plastiki, rubber-plastiki slippers, shangu, slippers, shangu dzegungwa , inotsvedza, slippers yekugezera, hotera slippers, katuni masipisi, jelly shangu, vaviri slippers uye EVA shangu dzedonje. Iyo kambani yakanyoreswa "Kumba Mucheche" uye "Jianmeida" mhando, izvo zvakanyatso kuvandudza chigadzirwa kuoneka uye bhizinesi kukosha kwekambani.
Muna Kubvumbi 2014, kambani yakanyoreswa uye yakashanda Taobao mall, iyo yakawedzera nzira dzekutengesa, dzakabatanidzwa nevatengi zvakananga, zvakanyatsonzwisiswa zvinodiwa nevatengi nekuziva huwandu hwekutengesa uye nekugadzira hukama hwakanaka hwevatengi. Iyo yekutengesa network yekambani iri mumatunhu anopfuura makumi maviri nematunhu nemaguta uye nzvimbo dzakazvimirira dzakatenderedza nyika, uye inofarira mukurumbira wepamusoro mumusika. Ipo ichidzikamisa musika wepamba, ichiongorora musika wepasi rose, musi waFebruary 1, 2013, kambani yakawana gwaro rekunyoresa reyadhi yekuzivisa yeRepublic yevanhu mushure mekuongororwa (tsika yekunyoresa encoding: 1301965360); muna Gumiguru 2014, kambani yedu yakagamuchirwa senhengo uye yakawana chitupa chekuve nhengo neChinese Chamber of Commerce yeEnd uye Export yeChiedza Industrial Zvigadzirwa neArts-Crafts (Chitupa Nha. 03140021). Nesimba ita kutengeserana kwekunze, kuti zvigadzirwa zveKenuo zvikwanise kuenda pasi.